အသိအမှတ်ပြုစာအုပ်များမှအကောင်းဆုံးစာပိုဒ် ၁၃၀ | ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
စာအုပ်များသည်စာပေလက်ရာများဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အားအသေးစိတ်တိုင်းကိုစိတ်ကူးစေနိုင်သည်။ စာရေးသူအပေါ်မူတည်သည်၊ သူတို့ကငါတို့ကိုဖမ်းနိုင်သည်၊ အသိပညာပေးသည်။ မည်သို့ပင်အမျိုးအစား၏, ချစ်ခြင်းမေတ္တာ, စိတ်ကူးယဉ်သို့မဟုတ်ဆိုင်းငံ့ခြင်းဖြစ်စေထိုသူအပေါင်းတို့၌ရှိ book များ ဒီဟာကသမိုင်းအတွက်အမှတ်အသားဖြစ်ခဲ့ပြီးယနေ့သင့်ကိုကျွန်တော်တို့လာရောက်ခေါ်ဆောင်လာတာပါ။
သင်သည်၎င်းတို့ကိုဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အခြေအနေ၊ Whatsapp တွင်ဓာတ်ပုံတင်ရန်နှင့်သင်ကိုယ်တိုင်ပုံတစ်ပုံတင်ရန်စကားစုများကိုသုံးလိုသည်ဖြစ်စေ (ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရုပ်ပုံများနှင့်ပုံများဖန်တီးထားသည်) ။ ဒါကြောင့်မင်းတို့သူတို့ကိုသင်ပျော်ရွှင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
သင့်အားအသိအမှတ်ပြုထားသောစာအုပ်များမှစာပိုဒ် ၁၃၀ ကိုပြပါမည်
Lily? ဤသူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ပြီးနောက်? - ထာဝရ။
လူတွေကိုထိခိုက်တဲ့အခါဘာဖြစ်သလဲသိလား။ Ammu ပြောခဲ့သည် လူတွေကိုသင်နာကျင်အောင်လုပ်တဲ့အခါမင်းကမင်းကိုမချစ်တော့ဘူး။ ဒါကမသေချာသောစကားများလုပ်ပေးသည်။ သူတို့ကမင်းကိုလူနည်းနည်းတော့လုပ်စေတယ်။
မင်းချစ်မိသွားပြီလား။ ဒါစက်ဆုပ်စရာမကောင်းဘူးလား သင့်ကိုအားနည်းစေတယ်။ သင်၏ရင်ဘတ်ကိုဖွင့ ်၍ သင်၏နှလုံးကိုဖွင့်ပါ။
"ဦး နှောက်ဘယ်မှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသင်မမြင်နိုင်ဘူးဆိုရင်သူ့ဟာသူစဉ်းစားနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုခုကိုဘယ်တော့မှမယုံတော့ဘူး။ "
သင်၌ရှိစဉ်သင်ချစ်သောသူတို့ကိုချစ်ပါ။ သင်လုပ်နိုင်သမျှသည် သငျသညျရသောအခါသူတို့ကိုသွားကြကုန်အံ့။ သင်မည်သို့ချစ်ရမည်ကိုသင်သိပါက၊
စာအုပ်တိုင်း၊ သင်ဒီမှာတွေ့တဲ့အသံတိုင်းမှာစိတ်ဝိညာဉ်ရှိတယ်။ ၎င်းကိုရေးသားသူနှင့်၎င်းဖတ်ရှုသူများ၏စိတ်ဝိညာဉ်သည်နေထိုင်။ အိပ်မက်မက်ခဲ့သည်။ စာအုပ်တစ်အုပ်သည်လက်များကိုပြောင်းလဲလိုက်သည်နှင့်တစ်စုံတစ်ယောက်သည်စာမျက်နှာများကိုမျက်လုံးချင်းမှိတ်လိုက်တိုင်းသူတို့၏စိတ်ဓာတ်သည်ကြီးထွားလာသည်။
သင်၏ဖြစ်နိုင်ချေအားလုံးကိုသင်သိသည်ဟုသင်ထင်သည် ထိုအခါအခြားလူများသင်၏အသက်တာသို့လာ။ ရုတ်တရက်နောက်ထပ်အများကြီးရှိပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့ချစ်သောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ထက် ပို၍ ကောင်းသောအရာကိုအမြဲတမ်းကြိုးစားသည်။ ငါတို့ထက်ပိုကောင်းအောင်လုပ်ရင်ငါတို့ပတ် ၀ န်းကျင်ကပိုကောင်းလာတယ်။
တစ်စုံတစ် ဦး ကိုဝေဖန်လိုသည်ဟုခံစားရသောအခါလူတိုင်းတွင်သင့်၌တူညီသောအခွင့်အရေးများမရှိကြောင်းသတိရပါ။
အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းမရပ်တန့်ပါနှင့်။
လူနှစ် ဦး သည်တူညီသောစာအုပ်ကိုတစ်ခါမျှမဖတ်ဖူးကြပါ။
နံပါတ် (၄) Privet Drive မှ Mr. နှင့် Dursley တို့သည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်ဟုဆိုရသည့်အတွက်အလွန်ဂုဏ်ယူပါသည်။
Talk nonsense သည်လူသားတို့၏အခြားသက်ရှိများအပေါ်တစ်ခုတည်းသောအခွင့်ထူးဖြစ်သည်။ အနတ္တကိုပြောခြင်းအားဖြင့်လူတစ် ဦး သည်အမှန်တရားဆီသို့ရောက်ရှိလာသည်။ ငါပြောသောစကားသည်အနတ္တဖြစ်၏။
တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ကြိုက်နှစ်သက်ရန်မလိုဘဲသင် မျှဝေ၍ မရနိုင်သည့်အရာအချို့ရှိပါသည်။ တဆယ်နှစ်ပေရှိသောတောင်တန်းလှည့်လည်ခြင်းကိုနှိပ်ခြင်းတို့သည်တစ်ခုဖြစ်သည်။
လူတွေရှိတယ်၊ သူတို့အတွက်သင်လုပ်လေလေ၊ သူတို့အတွက်သူတို့လုပ်လေလေပဲလေ။
မင်္ဂလာပါကလေးများ ကမ္ဘာမြေမှကြိုဆိုပါတယ် နွေရာသီမှာပူပြီးဆောင်းရာသီမှာအေးတယ်။ ဒါဟာပတ်ပတ်လည်နှင့်စိုစွတ်သောနှင့်လူစည်ကားဖြစ်ပါတယ်။ အပြင်ဘက်မှာတော့ကလေး၊ မင်းဒီမှာအနှစ်တစ်ရာနီးပါးရှိတယ်။ ငါသိတယ်စည်းမျဉ်းတစ်ခုသာရှိတယ်, ကလေးများ - သူကပြောတယ်, သင်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ဖို့ရှိသည်။
အကြီးမားဆုံးသောစွန့်စားမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုစောင့်မျှော်နေသောအရာဖြစ်သည်။ ဒီနေ့နဲ့မနက်ဖြန်တွေမပြောသေးဘူး။ ဖြစ်နိုင်ခြေများ၊ အပြောင်းအလဲများအားလုံးသည်သင်၏အရာများဖြစ်သည်။ သင်၏လက်၌သင်၏အသက်တာ၏ပုံသဏ္breakာန်ကိုချိုးဖျက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဘဝကမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြောင်းလဲသွားတယ် ဘဝချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားသည်။ သင်အဆုံးသတ်သိသည်အတိုင်းသင်သည်ညစာစားပွဲနှင့်ဘဝကိုထိုင်ပါတော့သည်။
သက်ကြီးရွယ်အိုများသည်တစ်စုံတစ်ရာကိုသူတို့ဘာသာသူတို့နားလည်သဘောပေါက်။ မရပါ။ ကလေးများအား၎င်းတို့အားထပ်ခါတလဲလဲရှင်းပြရန်အလွန်ပျင်းစရာကောင်းပါသည်။
Wands သည်သူတို့ကိုအသုံးပြုသောစုန်းများကဲ့သို့အစွမ်းထက်သည်။ အချို့စုန်းမများသည်အခြားသူများထက်ပိုကြီးပြီးပိုကောင်းသည်ဟုဝါကြွားလိုကြသည်။
ဘာသာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အဆိုးဆုံးမှာဘာသာရေးလူမျိုးများဖြစ်သည်။
သင်၏အတွင်း၌မထုတ်ဝေရသေးသောဇာတ်လမ်းကိုသယ်ဆောင်ခြင်းထက် သာ၍ ကြီးသောဝေဒနာသည်မရှိ။
ဤလောက၌ပျော်ရွှင်မှု၊ ပျော်ရွှင်မှုမရှိ၊ ပြည်နယ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုနှိုင်းယှဉ်မှုသာရှိသည်။ အကြီးအကျယ်စိတ်ပျက်အားငယ်မှုကိုခံစားခဲ့ရသောသူတစ် ဦး တည်းသာလျှင်အကောင်းဆုံးပျော်ရွှင်မှုကိုရရှိနိုင်သည်။ အသက်ရှင်ဖို့ဘယ်လောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာသိချင်ရင်သေချင်တယ်။
ငါအလုပ်လုပ်ရတာမကြိုက်ဘူး၊ ဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူး၊ ဒါပေမဲ့အလုပ်မှာဘာကိုကြိုက်လဲဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာဖွေဖို့အခွင့်အရေးရတယ်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်အဖြစ်မှန် - သင်အတွက်မဟုတ်၊ အခြားသူများအတွက်မဟုတ် - အခြားမည်သူမျှမသိနိုင်သောအရာ။
သင်ချစ်မြတ်နိုးရသူများကို“ မ” ဟုမပြောနိုင်ပါ၊ မကြာခဏဆိုသလိုပင်။ လျှို့ဝှက်ချက်ပါပဲ။ သင်လုပ်သည့်အခါ၎င်းသည်“ ဟုတ်ကဲ့” လိုအသံဖြစ်ရမယ်။
အုတ်မြစ်ချခဲ့တဲ့အချိန်၊ နေရာ၊ ဒါမှမဟုတ်ကြည့်၊ စကားလုံးတွေကိုငါရှာမတွေ့ဘူး။ ဒါဟာအချိန်ကြာမြင့်စွာဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါကစတင်ခဲ့သည်မသိမှီအလယ်၌ရှိ၏။
ငါဆရာဝန်မသေသေးဘူး မသေခြာဘူး။ ငါလုပ်စရာတွေရှိတယ်။ တကယ်တော့ငါသေဖို့တစ်သက်တာရပါလိမ့်မယ်။
ငါဟာငှက်မဟုတ်၊ ပိုက်ကွန်လည်းငါ့ကိုဖမ်းမိတယ်။ ငါလွတ်လပ်သောအလိုတော်နှင့်အတူလွတ်လပ်သောလူသားတစ် ဦး ဖြစ်၏။
ငါဘာမျှော်လင့်ရမလဲဆိုတာမသိဘူး၊ ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ဤအရာကိုသိသည်။ ဖျားနာနေသောလူနာများကိုကုသရန်လိုအပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ များကိုအခွင့်အလမ်းများ၊ ကျွန်ုပ်တို့ဆုံးရှုံးသွားသောသူများကိုပင်သတ်မှတ်သည်။
Castaways အနည်းငယ်ကမူသူတို့သည် Mr. Patel ကဲ့သို့ပင်လယ်ထဲတွင်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီးအရွယ်ရောက်ပြီးသောဘင်္ဂလားကျား၏ကုမ္ပဏီတွင်လည်းမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မှမဆိုနိုင်ပါ။
မွန်းလွဲပိုင်းတွင်သူသည်ယခင်ကကြည့်ရှုရန်အချိန်မရခဲ့သော "The Rings of the Lord" ရုပ်ရှင်ရုံကိုသွားခဲ့သည်။ Orcs သည်လူသားများနှင့်မတူဘဲရိုးရှင်းပြီးရှုပ်ထွေးသောသတ္တဝါများဖြစ်သည်ဟုသူထင်ခဲ့သည်။
သူတို့သည်ပြောချင်သော်လည်းစကားမပြောနိုင်၊ သူတို့မျက်ရည်များကျခဲ့ရသည်။ ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်ရွံရှာဘွယ်သောရောနှောခြင်းရှိကြ၏။ သို့သော်ထိုဖြူဖပ်ဖြူရောသောမျက်နှာများသည်အနာဂတ်အသစ်၏အစနှင့်အတူထွန်းလင်းခဲ့သည်။
သို့သျောလညျးငါခရီးထွက်မိုင်တိုင်းအားဖြင့်ငါရှုပ်ထွေးသောအခါ, ငါစားသောမုန့်ညက်တိုင်း, ငါတွေ့ဖူးသောသူတိုင်း, ငါအိပ်ပျော်နေတဲ့အခန်းတိုင်း၏အခါ။ သာမန်ပုံရသကဲ့သို့ပင်ကျွန်ုပ်စိတ်ကူးထက်ကျော်လွန်သည့်အချိန်များရှိသည်။
အကျွန်ုပ်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ ကျွန်ုပ်၏ချီးမွမ်းခြင်းကိုခံယူပါ၊ ကျွန်ုပ်ကိုအပြစ်တင်ပါ၊ အောင်မြင်မှုအားလုံးကိုယူပါ။ ကျရှုံးခြင်းကိုယူပါ။
ယခုအထိစာအုပ်များ၏စကားစုများရောက်ရှိလာပြီ၊ ၎င်းတို့သည်သင်၏ရည်မှန်းချက်ကိုပြည့်စုံစေရန်၊ ၎င်းတို့ကိုအသုံးပြုရန်၊ ထုတ်ဝေရန်ဖြစ်စေ၊ ဤသည်တစ်ခါတစ်ရံလူကွဲပြားခြားနားသောဒေသများရှိထင်ဟပ်စေ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » စာပိုဒ်တိုများ » အသိအမှတ်ပြုစာအုပ်များမှအကောင်းဆုံးစာပိုဒ် ၁၃၀
နယ်လ်ဆင် Arturo Clisánchez Morillo ဟုသူကပြောသည်
ငါအသိအမှတ်ပြုစာအုပ်တွေထဲကနေဤ 130 စာပိုဒ်တိုများကြိုက်တယ်။ ဒီဗဟုသုတကြွယ်ဝမှုကိုကျွန်တော်ဆက်ရချင်ပါတယ်
နယ်လ်ဆင် Arturo Clisánchez Morillo အားပြန်လည်ပြောဆိုပါ
Jorge Lulo ။ ဟုသူကပြောသည်
အံ့သြစရာကောင်းပြီးကြွယ်ဝပြည့်စုံစေတဲ့ကျေးဇူးတင်စကား၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ငါသူတို့ဆီကအများကြီးသင်ယူပြီးသူတို့နဲ့အများကြီးသင်ပေးတယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Jorge Lulo သို့ပြန်ပြောပါ။
လှုံ့ဆော်မှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးဘွဲ့နှင်းသဘင်စကားစု ၈၀ နှင့်အတူစာရင်းပြုစုပါ